Shirkadda Saracen oo Lagu Eedeeyay inay ku Xadgudubtay Cunaqabateynta Hubka ee Soomaaliya | Anti-Tribalism
← SELECTING A NEW GOVERNMENT AND A NEW PARLIAMENT FOR SOMALIA!
(Daawo) Madaxweyne Shariif oo sheegay in Khaatumo State ay buuxisay Shuruudihii Maamul-Goboleedyada lagu aqoonsan lahaa haatanna ay lamid tahay Maamul-Goboleedyada kale ee Puntland, Iyo Somali-land!!. →
Shirkadda Saracen oo Lagu Eedeeyay inay ku Xadgudubtay Cunaqabateynta Hubka ee Soomaaliya
Garoon Saracen ka sameysatay duleedka Boosaaso Nairobi Siddeed iyo toban bilood ka dib markii shirkadda Saracen International ay ka hawl bilawday Puntland ayaa waxaa soo baxaysa walaac laga qabo in shirkaddu ay ku lug leedahay hawlo xadgudub ku ah xayiraada hubka ee la saaray Soomaaliya sanadkii 1992.
Warbixin ay gudbiyeen Guddiga Gaarka ee Qaramada Midoobay ugu xilsaaran la socodka cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea ee la yiraahdo “UN Somalia and Eritrea Monitoring Group (SEMG)” ayaa lagu sheegay in shirkadda Saracen International ay wado dhaqdhaqaaq khatar ku ah nabadda Soomaaliya ka dib markii ay si sharci darro ah dalka u gelisay hub aysan fasax u heysan. Matthew Bryden oo ah xiriiriyaha Guddiga la socodka cunaqabateynta hubka ayaa bishii June 2011 u sheegay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay in shirkadda Saracen aysan wax ogolaansho sharci ah u heysan inay shirkad amni ahaan uga shaqeyso Puntland, iyadoo warbixinta guddigu uu gudbiyey bishii June 2011 ay shaaca ka qaaday in Saracen xaalada Soomaaliya uga dareyso ka dib markii ay ku lug yeelatay hawlo halis ku ah deganaanshaha. Shirkaddan Saracen oo hadda joogta Puntland waxay ka mid tahay shirkado gaar loo leeyahay oo ay sameysteen calooshood u shaqeystayaal Koonfur Afrikaan ah iyo kuwo Ingiriis ah. Laakiin kooxaha iska leh shirkaddan wax sharci ah kama heystaan wadamadooda, sida uu sheegayo wageyska the Independent ee laga leeyahay Koonfur Afrika.
[ Halkan ka akhri warbixinta wargeyska ] Saracen waxay hadda heysaa ciidanka ugu badan Afhayeen u hadlay Guddiga Dhowrista Heshiisyada Hubka ee Koonfur Afrika ( National Conventional Arms Control Committee ) oo lagu magacaabo Tlali Tlali ayaa sheegay in qeybta Koonfur Afrika ee Saracen iyo kooxaha kale ee kula jira hawlgalka ay ka wadaan Soomaaliya aysan dhamaantood heysan wax ruqsad ama fasax ah oo ay tilmaamaya inay yihiin shirkad qandaraasle ah!. Qaramada Midoobay oo aad uga walaacsa hawlgalka Saracen ayaa hadda ku raadjooga sidii ay u heli lahaayeen cadeymo dheeraad ah oo muujinaya xadgudubka Saracen ay ku hayso cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya taasoo ka hor imaaneysa qaraarada kala ah 1973 iyo 1976 ee Golaha Amaanka ay horay uga soo saareen xayiraada hubka ee Soomaaliya. Waxaana lagu wadaa in xog faahfaahsan oo arinkan ku saabsan markale loo gudbiyo Golaha Amaanka bartamaha sanadkan 2012 xilligaasi oo Guddiga Gaarka ee Cunaqabateynta Hubka Soomaaliya ay keeni doonaan warbixin sanadeedkooda. [ Warbixin sanadeedkii 2011 loo gudbiyey Golaha Amaanka ] Saraakiisha CIA iyo Saracen Hawlgalka Saracen International ee Soomaaliya ka wado waxaa hadda hogaamiya nin lagu magacaabo Lafras Luitingh kaasoo ku magacaaban agaasimaha barnaamijka. Luitingh ayaa sidoo kale ah agaasimaha shirkad lagu magacaabo “Australian African Global Investments (AAGI)” oo lafteeda dhanka logistikada u qaabilsan hawsha ay wado Saracen. Hawsha shirkadda Saracen ka wado Soomaaliya waxaa maalgeliya rag aan magacooda la sheegin oo degan Imaaraadka Carabta. Waxay shirkadda sidoo kale xiriir la sameysatay rag hore uga tirsanaan jiray sirdoonka Mareykanka CIA waxaana ka mid ah nin lagu magacaabo Erik Dean Prince . Erik Dean waa madaxa ugu sareeya shirkadda Blackwater oo dalalka Ciraq iyo Afghanistan kala shaqeysa ciidamada Mareykanka, laguna tuhunsan yahay in hawsheeda amaanka ay u dheer tahay hawlo basaasnimo ah. Blackwater waxay hadda ka hawlgashaa Abu Dhabi iyadoo adeegsaneysa magaca “ Xe Services ”. [ Akhri magac bedelashada Blackwater ] Waxaa jira nin saddexaad oo ku dhexjira dhaqdhaqaaqa Saracen ee Soomaaliya kaasoo ah Michael Shanklin oo horey u ahaan jiray sarkaalkii CIA-da Mareykanka u qaabilsanaa Muqdisho. Saracen iyo DKMG ah Saraaakiisha Saracen qaarkood ayaa ah xubno hore oo CIA ka tirsanaan jiray Saracen ayaa markii ugu horeysay sanadkii 2010 la ogaaday inay heshiis kula jirto DKMG ah. Heshiiskaasi oo ay gashay xukuumaddii Cumar C/rashiid Sharma’arke ayaa la sheegay inuu dhigayey tababarida ciidamada badda iyo ciidanka ilaaliya madaxtooyada Villa Soomaaliya. Waxaana ka dib ku xigay heshiika ay la gashay maamulka Puntland sanadkii 2011. Hase yeeshee bishii Febraayo 2010 ayaa xukuumadda KMG Soomaaliya shaaca ka qaaday inay ka baxday heshiiskii Saracen. Mareykanka iyo Qaramada Midoobay ayaa labaduba muujiyey walaaca ay ka qabaan hawlaha Saracen taasoo keentay in DKMG ah ay joojiso heshiiskii ay kula jirtay. Waxayna arinta sii xoogeysatay markii qalab ciidan oo ku socday Puntland isla markaana saarnaa diyaarad u kireysan Saracen lagu qabtay garoonka diyaaradaha Hargeysa. Qalabkaasi oo ahaa dharka ciidanka, kabo iyo qalab kale oo aan la shaacin ayaala qiyaasayaa inuu in ku filan illaa 500 askari qalabeyntooda. Inkastoo dawlada dhexe ee Soomaaliya ay joojisay heshiiska Saracen haddana Puntland ayaa weli heshiis kula jirta Saracen iyadoo hawlihii shirkadana ay sii ballaarteen. Saldhiga ugu weyn ee Saracen waxay ka dhigatay meel u dhow dekeda Boosaaso ka dib markii DKMG ah ay uga baxday heshiiska. Hub cusub oo soo galay Markii bishii June 2011, warbixinta Guddiga Gaarka ee cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya loo gudbiyey Golaha Amaanka, waxay Saracen sheegtay inay joojineyso dhamaan wixii hawl ah ee ay ka waday Soomaaliya, laakiin ay ilaashaneyso qalab ka yaalla Soomaaliya ayna bilaabeyso mashaariic bani’aadanimo sida dhismaha isbitaalo iyo raashiin gargaar oo la gaarsiiyo dadka ku nool dhulka miyiga ah. Warbixinta wargeyska ayaa sheegtay in Saracen ay keentay hub cusub oo aan horey suuqyada Soomaaliya u yaalin kaasoo ay u keentay ciidamada Faroole walow horey Saracen ay u sheegtay inaysan hub keeni doonin oo kaliya ay ku ekaan doonto wixii ay horey u heysteen ciidamada maamulka Faroole. Ilo wareed ku dhow Qaramada Midoobay ayaa sheegay in Saracen ay gudaha dalka soo gelisay illaa 15,000 tone oo qalab militari ah. Haddana ay gacanta ku heyso 1,500 askari oo ay tababareyso tiradaasoo saddex jeer ka badan intii ay tababartay ka hor intii aysan Qaramada Midoobay ka joojin shaqada ay ka wado Puntland. Lixdii bilood ee ugu dambeeyay sanadkii tegey 2011, illaa toban jeer ayaa dekeda Boosaaso laga joojiyey hawlaha caadiga ee dekeda qabato sabababo lagu sheegay qalabka u dagaya Saracen darteed ( Akhri warbixinta dekeda ), waxaana shaki weyn laga qabaa waxa uu dhab ahaan qalabkaasi ka koobnaa wallow wasiirka maaliyada Puntland Faarax Cali Shire oo Raxanreeb weydiisay waxa ka degaya dekeda uu xilligaasi sheegay in raashiin deeq ah ay dejinayeen kaasoo illaa hadda aan la ogeyn halkuu ku dambeeyay. [ Akhri hadalkii wasiirka maaliyadda ] Cabashada Galmudug In Saracen hub soo gelineyso dalka, waxaa sii xoojiyey ka dib markii cabasho ay ka timid maamulka Galmudug oo Puntland ay deris yihiin, waxaana madaxweynaha Galmudug Maxamed Axmed Caalin uu Guddiga Gaarka ee Cunaqabateynta hubka ee Qaramada Midoobay warqad uu u diray oo ku taariikheysan 6-dii Disembar 2010 uu ku sheegay in ciidamada maamulka Faroole ay dad reer miyi ah ku laayeen miyiga gobolka Mudug. Warqada Galmudug ayaa sheegtay in rag ku hubeysan qoryaha casriga iyo gaadiidka gaashaaman degaanka Bacaadweyne ku dileen 35 ruux, 46 kalana ay dhaawaceen kuwaasoo u badnaa haween iyo carruur. Warqada Caalin uu qoray waxay kaloo ku eedeysay in Saracen ay hub iyo talo siineyso maleeshiyo daacad u ah madaxweynaha Puntland C/raxmaan Faroole. Wargeyska The Independent ayaa sidoo kale warbixinta ku sheegay in qabiilada ay sida gaarka ah u beegsadeen ciidamada madaxweyne Faroole uu ka mid yahay reerka uu ka soo jeedo hogaamiyaha koox maleeshiyo ah oo ka dagaalanta buuraleyda Galgala ee gobolka Bari Sheekh Maxamed Siciid Atam. Wararka kale ee wargeysku sheegay ayaa ah in Saracen ay ciidamo tiro badan ku daad gureysay deegaanka Qaw oo ku dhow Boosaaso. Waxayna hadda shirkada heysataa afar diyaaradood oo nooca helicopter-ka ah iyo ugu yaraan lix doonyood oo nooca dheeraaya ah. Walaac midkan la mid ah waxaa Qaramada Midoobay u gudbiyey hay’adda caalamiga ee duulimaadyada ee ICAO oo ka cabatay in Saracen garoon dayuuradeed oo macmal ah ka dhisatay meel u dhow garoonka Boosaaso ee Benderqaasim. Garoonkaasi oo la sheegay inay habeenkii kakacaan diyaarado helicopters ah ayaa la sheegay inuu qalqal geliyey hawlihii garoonka Boosaaso oo diyaaradaha rayidka ay ku degaan. [ Muran ka dhashay garoonka Saracen ] Saracen iyo Shidaal baarista Puntland Saracen oo qalab ka dejisay dekeda Boosaaso bishii Oktoobar 2011 Wargeyska the independent ayaa sheegaya in shirkadda Saracen waqti xaadirkan ay masuul ka tahay ciidanka ugu badan ee Soomaaliya jooga- marka laga reebo ciidamada AMISOM ee jooga Muqdisho. Waxayna Saracen ciidankan gacanta ku heyso ay wakiil uga tahay maamulka Puntland ee uu hogaamiyo C/raxmaan Faroole. Wargeyska ayaa sheegay in sawiro laga soo qaaday ay muujinayaan ciidamada Saracen oo ku qalabeysan qoryaha fudud ee gacanta lagu qaato, qoryaha culus iyo gaadiidka gaashaaman ee hubka la saaro. Inkastoo ciidamada ay tababareyso Saracen ay ku sheegtay inay burcad badeeda la dagaalami doonaan ayaa hadda aysan jirin wax tallaabo ah oo ay hawsha ka hortaga burcad badeeda ku leedahay sida warbixintu sheegeyso. Warar sir ahna waxay muujinayaan in Maxamed Faroole oo ah wiil uu dhalay madaxweynaha Puntland uu si weyn ugu leeyahay hawlaha shirkadda Saracen kaasoo Saracen soo dhexgeliyey sugida amaanka goobaha laga baarayo shidaalka ee Puntland. Arintaasoo keeni karta in Saracen ayba suuq u hesho sidii ay hub fara badan u soo iibin lahayd. Kharashka lagu maalgeliyey shirkaddan ayaa lagu qiyaasayaa $50 milyan (konton milyan doolar) saddexda sano ee hore. Sida Puntland ay sheegtayna waxay shirkada ka shaqeyn doontaa tababarida ciidamada badda laakiinwargeyska ayaa sheegayaa in Qaramada Midoobay ay qabtay tuhun ah in Puntland ay dano kale ku hoos wadato arinta ciidamada.
Posted on February 27, 2012, in Anti-Tribalism. Bookmark the permalink.	Leave a comment.